Xiaomi Mi Band 2 bụ gọọmentị ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ike na mgbe ụbọchị ole na ole gara aga, ha ga-eweta ya Xiaomi max, nke na-esiteghị na ngwaọrụ flash ọzọ, ihe anyị niile tụrụ anya ya, taa ndị na-emepụta China ewepụtala ihe ọhụrụ Xiaomi Mi Band 2 nke na-abịa na-ebu akụkọ na ọrụ ọhụrụ.
Naanị ụnyaahụ, nnukwu ndị China, nke na-azụ ahịa Apple ma ọ bụ Samsung na China okpukpu atọ, kwupụtara nkwekọrịta na Microsoft, ịwụnye ngwanrọ na ekwentị ha na ikekwe nwee ike iru United States n'ụzọ gọọmentị. Taa oge ụda anaghị ada ada na ihe eji ejiji ọhụụ adịlarị gọọmentị nke ga - enye ụlọ ọrụ ọ na - agba ọsọ dị ukwuu Hugo Barra.
Tupu anyị abanye na nyocha nke uwe ọhụrụ a, anyị kwesịrị ịtụ anya na ọ bụrụ na ụdị mbụ nke Xiaomi Mi Band ghọrọ ngwaọrụ kachasị ere nke ụdị ụwa a, Xiaomi Mi Band 2 a taa ewerewo nzọụkwụ mbụ iji bụrụ ọnụọgụ kachasị aga nke ọma. mgbaaka na ọnwa ndị na-abịanụ.
1 Ihuenyo OLED, ihe ọhụrụ nke Xiaomi Mi Band 2
2 Atụmatụ na nkọwa
4 Ihe ikpeazụ Xiaomi meriri n'ahịa ndị a na-eyiri eyi?
Ihuenyo OLED, ihe ọhụrụ nke Xiaomi Mi Band 2
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ Xiaomi Mi Band 2 bụ ihe mgbakwunye nke a Igwe OLED 0.42 nke anụ ọhịa nke anyị nwere ike ịhụ ụkpụrụ dị iche iche edere mgbe ị na-eje ije ma ọ bụ na-ehi ụra. Na ụdị mbụ nke ngwaọrụ ahụ ọ dị mkpa ibudata ngwa na ngwaọrụ mkpanaka anyị iji nyochaa data niile edere, mana ugbu a, nke a agaghịzi adị mkpa ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịhụ data niile site na ihuenyo ọhụrụ.
Ọdịdị a na ihuenyo ihuenyo nwere ike itinye otu n'ime njirimara dị ukwuu nke Xiaomi Mi Band n'ihe egwu na ọ bụ onye ọzọ karịa nnwere onwe ya. Agbanyeghị, ọ dị ka onye nrụpụta China arụ ọrụ n'ụzọ miri emi n'akụkụ a ma kwenye na Mi Band 2 nke enyere n'ihu taa ga-enye anyị a nnwere onwe nke ruru ụbọchị 20.
Xiaomi weputara ozi a ka anyi gha ewepu ya iche rue mgbe anyi gha anwa ya omimi. N'ezie, ọ bụrụ na ọ na-enye anyị ọbụlagodi nnwere onwe, ọtụtụ n'ime anyị ga-enwe afọ ojuju ebe ọ ga-abụ okpukpu abụọ nke ụdị ejiji ọ bụla na-enye nke nwere ihu igwe arụnyere.
Atụmatụ na nkọwa
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị atụmatụ na nkọwa nke Xiaomi Mi Band 2 ọhụrụ;
Akụkụ: 40.3 × 15.7 × 10.5 mm
Arọ: gram 7
0,42 inch OLED ụdị ihuenyo.
Dekọọ usoro, calorie, anya, obi na ụra
IP67 ájá na mmiri na-eguzogide
Bluetooth 4.0 LEMA
70 mAh batrị nke ga-enye anyị oge niile dị ka Xiaomi ruo ụbọchị 20 nke nnwere onwe
Nkwupụta ozi na oku natara na ama site na ịma jijiji
Ihe onwunwe: plastik na aluminom maka ahụ na thermoplastic copolyester maka eriri
N'ime njirimara na nkọwa niile anyị enyochala, anyị ga-ekwu maka nke ikpeazụ, ya bụ, gbasara ihe eji. O doro anya, na ngwaọrụ dị ka nke a nke onye na-emepụta China ga-ere maka ọnụahịa dị ịtụnanya, dịka ị nwere ike ịhụ obere n'okpuru, ọ gaghị enwe ike ịnweta ihe dị oke mma. Dị ka ọ mere na nke mbụ Mi Band anyị ga-ahụ plastic dị ka isi protagonist, ọ bụ ezie na ụfọdụ aluminom mgbakwasa.
Mmechi nke ngwaọrụ ahụ ga-abụrịrị otu n'ime ihe ukwu nke Xiaomi Mi Band 2. Anyị niile ndị nwere ụdị nke mbụ nwetara nsogbu nke mmechi ahụ, bụ nke edozire site na ịzụta eriri ọhụrụ mbụ ma ọ bụ nke ka mma nke ndị ọrụ China nyere oge. Olile anya na akụkụ a emeela nke ọma, ọ bụ ezie na anyị na-atụ ụjọ nke ukwuu n'ihi na ihe anyị hụrụ abụghị.
N'ezie na dị ka ọ dị na mbụ, Xiaomi ekwenyelarị na e nwere Xiaomi Mi Band maka June 7 na-esote, ọ bụ ezie na n'oge a naanị na China. Ọnụahịa nke ngwaọrụ ọhụrụ a bụ otu n'ime ike nke onye nrụpụta China chọrọ ịrata ọtụtụ ndị ọrụ.
Ma ọ bụ ya Ọnụ ahịa ya maka China ga-abụ yuan 149, nke pụtara ihe dị ka euro 20,20 na ihe dịka dollar 22,65.. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọnụahịa dị oke ọnụ ma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị lelee ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a ugbu a n'ahịa.
Nnweta na mba ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ na Spain, ga-abụ nnukwu nsogbu Xiaomi ọzọ na nke ahụ bụ na anyị amatala nke ọma na anyị agaghị enwe ike ịnweta Xiaomi Mi Band 2 nke ọchịchị mana site na ndị ọzọ, nke doro anya na ọ bụ nnukwu nsogbu . N'agbanyeghị ihe niile, a ga-atụ anya na site na June 7 na-esote anyị ga-enwe ike inweta ya, maka ọnụahịa dị elu karịa, site na ndị ọzọ.
Ihe ikpeazụ Xiaomi meriri n'ahịa ndị a na-eyiri eyi?
Enweghi ike ịnwale Xiaomi Mi Band 2, ihe niile na-egosi na anyị na-eche ihu ngwaọrụ pụrụ iche, nke ga-adọta uche nke onye ọrụ ọ bụla ngwa ngwa n'ihi ọnụ ala ya. Onye na-emepụta China enweela ike gbanye ahịa a na-eyi akwa na ụdị izizi nke mgbaaka quantifying, mana ya na udi nke abuo a, a na m atu egwu na onwere ike gbuo ihe ikpeazu.
Onweghi ndị nrụpụta ọzọ nwere ike ịnye anyị ngwaọrụ ndị yiri ya ma karịa ihe niile nwere ọnụahịa yiri ya. Nwere ike ịgwa maka nke a naanị site na ịlele ụlọ ahịa mebere emepe. N'ezie, iji nweta obere ego anyị ga-achọta ngwaọrụ nke nwere ike ịkwalite dịka ọmụmaatụ n'ihe gbasara imepụta ma ọ bụ ihe eji eme ihe, mana onye na-eche banyere nke ahụ mgbe ọnụahịa ịkwụ ụgwọ dị oke ala?
Kedu ihe ị chere banyere Xiaomi Mi Band 2 ọhụrụ na ọnụahịa ya dị egwu?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. Echefukwala ịgwa anyị ma ọ bụrụ na ị ga-enweta uwe ọhụrụ a ozugbo ọ dị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Xiaomi Mi Band 2 bụ ugbu a
Nke a bụ ihe ọhụrụ Samsung Gear Fit 2